जुत्ता चप्पल लगाउन नजान्दा पनि भाग्य बिग्रन सक्छ ! – Complete Nepali News Portal
जुत्ता चप्पल लगाउन नजान्दा पनि भाग्य बिग्रन सक्छ !
आउनुहोस् जुत्ता चप्पल लगाउन नजान्दा पनि भाग्य बिग्रन सक्छ, भन्ने विषयको सामग्री शुरू गर्नु भन्दा पहिला यो मन्त्र उच्चारण गरौँ ः
ग्रामे वायदिवारण्ये ये सर्पप्रचरन्ति। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।९।।
ज्योतिष शास्त्र यस्तो भन्छ हामीले बच्चादेखि नै सुन्दै आएका छौं कि जुत्ता तथा चप्पल उल्टो पल्टिएको छ भने त्यसलाई सुल्टो वा सीधा पल्टाउनुपर्छ । बाटो तथा आँगन अगाडि उल्टो जुत्ता देखियो भने साइत बिग्रिन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानव जीवनसँग सम्बन्धित हरेक चीज कुनै न कुनै ग्रहसँग जोडिएका हुन्छन । र यसै क्रममा हाम्रा जुत्ता पनि आउँछन । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार हाम्रा जुत्ताको सम्बन्ध शनि ग्रहसँग हुन्छ ।
यसकारण यो पनि मान्यता छ कि जसलाई शनिको दशा लागेको हुन्छ उनीहरुले जुत्ता दान गर्नु पर्ने हुन्छ । आज हामीले हामीले लगाउने जुत्ता र त्यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा पार्ने प्रभावबारे उल्लेख गर्दैछौं ।